Baolina kitra : Nahatafiditra ny baoliny faharoa i Niasexe Milson
Tao anatin’ny lalao roa nilalaovan’ity mpilalaon’ny AS Adema, any Anse Réunion (Seychelles) ity dia nahatafiditra ny baoliny faharoa i Niasexe Milson, omaly.
Isan’ireo mpilalao mpanafika tsy mamela mahazo amin’ireo lalao rehetra ataony ity mpilalaon’ny Ecoredipharm teo aloha ity. Mampiavaka azy ny fahaizany mampiasa ireo tongotra roa eo amin’ny famaranana ny fanafihana. Eo ihany koa ny hamafin’ny dakany tahaka ny nanakobanany ny haraton’ny Vesta Team, tamin’ny herinandro sy ny an’ny Assm, omaly teo amin’ny minitra faha-70.
Io no baolina faharoa nivoahan’ny AS Adema ho mpandresy teo amin’ny lalaon’izy ireo sy ny ekipan’Amparibe teny Carion, omaly, taorian’ny baolina nampidirin’I Onja Tiaray teo amin’ny minitra faha-60 ka nahatonga azy ireo ho faharoa.
Notanan’ny Vesta Team FC sahala samy tsy nitoko kosa ny Tana Formation FC nialoha ny fihaonana. Amin’ny alahady ho avy izao no hifampitady etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny AS Adema sy ny Tana Formation FC, amin’ny andro faha-16, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga ho an’ny « ligue 1 ». Hitohy anio kosa ny andro faha-15 amin’ny alalan’ireo lalao telo eny Carion.